News - GERISS Ugboro abụọ mgbidi ebughibu igbe drawer usoro, ka ị na elu nkà na kichin!
Site na mmepe nke oge ahụ, ndị mmadụ nwere ihe dị elu ma dị elu maka kichin kichin. A set nke ezigbo kichin kabinet, ngwaike bụ oké mkpa akụkụ. GERISS HARDWARE bụ ọkachamara ọkachamara na China nke na-arụ ọrụ kichin kichin. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe kpatara ị ga - eji họrọ slim sịnịsị draịva.
Jeriko M02 Series ebughibu drawer igbe sistemụ, drawer n'akụkụ ogwe ndị 13mm ọkpụrụkpụ, mee ka gị drawer nwere ibu ohere nchekwa. Ogwe akụkụ drawer ị nwere ike ahaziri agba dịka agba gị masịrị. Anyị ebughibu drawer usoro M02 Series, zoro ezo drawer ị nwere ike ịhọrọ adụ nso na inupụ imeghe ọrụ abụọ. Ngwaahịa a bụ multifunctional. Nwere ike iji dramo na-adọrọ adọrọ ma na mpempe akwụkwọ mpịachi ma ọ bụ drawer osisi. Njirimara a nwere ike ime ka ị belata nrụgide nke ngwaahịa.
N'ihi na ala ugwu drawer slide, ị nwere ike họrọ 2D n'ihu brackets ma ọ bụ 3D n'ihu kpochidoro ngwaọrụ. Ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịga na weebụsaịtị anyịhttps://www.yangli-sh.com/drawer-system/ ịhọrọ ebughibu drọwa usoro. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.